Muslimiinta ku nool gobolka Ahmara ee dalka Itoobiya oo ka sheeganaya xadgudubyo dhan walba ah.
Thursday September 17, 2020 - 08:40:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Booliska wadanka Austria ayaa xaqiijiyay in ay gacanta ku dhigeen gaari shaaximan oo lagusoo dhax qariyay tobanaan qof tahriibayaal ah kuwaasi oo si sharci darra ah ku geli lahaa qaaradda Yurub.
Gaarigan oo siday 40 ruux oo badankood kasoo jeeda wadamada Ciraaq,Suuriya iyo Turkiga ayaa lagu qabtay waqooyi Bari dalka Austria.
Mas'uuliyiin ayaa sheegay in dadka tahriibayaasha ah oo 6 kamid ah carruur yihiin ay halis gashay noloshooda kadib markii ay neef qabatoomeen, waxaa gabaabsi ka ahaa Oksijiinka lagu neefsado kaasi oo gaariga ku xirnaa.
"Ciidamada booliska ayaa gaari xamuul ah istaajiyay kadibna waxaa kasoo daatay 40 qof Tahriibayaal ah oo qaarkood xaalooda caafimaad ay aad uliidato" sidaas waxaa yiri sarkaal u hadlay Booliska Austria.
Darawalka gaariga oo udhashay dalka Turkiga ayaa sheegay in Tahriibayaashu ay dhiman lahaayeen haddii aan gaariga la istaajin laheyn sababa laxiriira dadka oo aan haysan meel ay ka neefsadaan, kooxaha tahriibka ku shaqeysta ayaa gaadiidka ka xira dhammaan daaqadaha si ay uga dhuuntaan eryashada ciidamada xuduudaha dowladaha Yurub.
Sanaddii 2015 ayaa xuduudda ay wadaagaan Hangari iyo Austria waxaa lagu qabtay gaari xamuul ah oo siday 71 qof meydad tahriibayaal ah.